Fikolokoloana sy fikolokoloana vatana any Gresy taloha | Fitsangatsanganana tanteraka
Nifanaraka tamin'ny fitsipiky ny filozofia klasika fahiny, ny fitondran-tena tany Gresy dia nifanindry tamin'ny hatsarana sy ny fikarakarana ny vatana. Tamin'ny fotoana, mitovy hevitra amin'ny hoe olom-pirenena vanona ny fananana vatana voakarakara tsara ary voaofana tsara. Lehilahy nanao fanatanjahan-tena nandritra ny ora maro tao amin'ny gym mba hahatratrarana ny hatsarana taloha amin'ny hatsarana mifototra amin'ny vatana mirindra sy atletisma.
Ny Grika, ankoatry ny fitazonana ny vatany amin'ny toe-batana tsara amin'ny alàlan'ny programa fanatanjahan-tena mahery vaika koa izy ireo dia niahy be loatra ny fahadiovan'ny tena manokana. Taorian'ny fampiharana gymnastika dia nanaraka fombafomba fanadiovana ny hoditra izy ireo ka nahatonga ny kolontsain'ny hatsaran-tarehy ho iray amin'ireo andrin'ny kolontsain'izy ireo, izay nisy fiantraikany tamin'ny sivilizasiôna hafa.
Ao amin'ity lahatsoratra ity nodinihinay ny momba ny fikolokoloana sy fikolokoloana vatana tany Gresy taloha. Te hahafantatra bebe kokoa ve ianao? Mamaky hatrany!
1 Ny trano fidiovana any Gresy fahiny
2 Fandroana ampahibemaso any Gresy taloha
3 Vehivavy any amin'ny fandroana ampahibemaso any Atena
4 Ny idealy ny hatsaran-tarehy vehivavy tany Gresy taloha
5 Fikolokoloana volo tamin'ny andro taloha
6 Fanesorana volo eo amin'ny tontolo klasika
7 Ny fombafomba fikolokoloana amin'ny kolontsaina hafa
Ny trano fidiovana any Gresy fahiny
Azontsika jerena ao amin'ny sary hosodoko amphora izay mbola velona mandraka androany ny Grika taloha dia niahy be momba ny fananana vatana sahaza sy salama, noho izany dia nandalo programa fitakiana fanatanjahan-tena izy ireo mba hahatratrarana vatana mirindra sy tsara tarehy.
Ao amin'ny amphoras, ny atleta dia tsy solontenan'ny fanatanjahan-tena fotsiny fa koa nanao fombafomba fanadiovana sy fikarakarana ny vatana avy eo. Ary nolokoina niaraka tamin'ny kojakoja kanto izy ireo, ohatra, ireo kaontenera kely misy menaka manitra izay nahantona tamin'ny rindrina na nafatotra tamin'ny fehin-tànan'ny atleta.
Ny lavenona, fasika, vato pumice ary raozy, amandy, marjoram, lavender ary menaka kanelina dia nampiasaina hanadiovana ny hoditra aorian'ny fampiharana. toy ny fanosotra fanosotra, colognes ary ny deodorants. Fitaovana iray hafa nampiasain'izy ireo taloha ny tongolo metaly lava sakanana hanala ny vovoka sy menaka be loatra amin'ny hoditra.
Ao amin'ny tranombakoka arkeolojika any Gresy ianao dia afaka mahita santionana amin'ny siny izay nampiasaina hitahiry ireo essences sy vokatra fanadiovana ireo. Izy ireo dia kaontenera vita amin'ny tanimanga na alabaster izay namboarina ary voaravaka endrika samihafa.
Fandroana ampahibemaso any Gresy taloha
Fantatra fa nisy fandroana ho an'ny daholobe tany Atena hatramin'ny taonjato faha-XNUMX tal, toerana nandehanan'ny lehilahy rehefa nanao fanatanjahan-tena tsy hoe hisasana fotsiny fa mba hiresahana amin'ireo mpampiasa hafa koa, satria noheverina ho toeram-pivoriana tena malaza izy ireo.
Ny fandroana ampahibemaso any Gresy taloha dia toerana midadasika izay mitazona olona an-jatony ary nozaraina ho faritra maro. Voalohany dia niditra tao amin'ny frigidarium (efitrano misy rano mangatsiaka handro sy hanaisotra ny hatsembohana), avy eo anjaran'ny tepidarium (efitrano misy rano mafana) ary farany dia nankany amin'ny caldarium (efitrano misy sauna).
Ny dokotera tamin'izany fotoana izany dia nanoro hevitra ny handro amin'ny rano mangatsiaka satria namelombelona ny vatana sy ny fanahy izy ireo raha ny fandroana mafana kosa no natao hampandeha tsara ny hoditra.
Vantany vao tapitra ny fombafomba fandroana dia nesorin'ireo mpizara ireo maloto tamin'ny hodiny ary nopotsehiny. Avy eo dia niditra an-tsehatra ireo mpanotra, izay nanosotra menaka manitra ny vatany mba hialana amin'ny hozatra.
Vehivavy any amin'ny fandroana ampahibemaso any Atena
Ao amin'ny fandroana ampahibemaso any Gresy taloha, dia nisy toerana namboarina ho an'ny vehivavy, na dia teo aza ny Ateniana manetry tena no tonga tao an-tranony, dia vehivavy ambony no nosasana. Ho an'ny fandroana dia nampiasa terracotta na vato fandroana vato feno rano tanana izy ireo.
Ny idealy ny hatsaran-tarehy vehivavy tany Gresy taloha
Ny teny hoe kosmetika dia avy amin'ny teny grika izay midika hoe "izay ampiasaina amin'ny fahadiovana sy ny hatsaran'ny vatana" indrindra manondro ny tarehy.
Ny mariky ny hatsaran-tarehy ho an'ny vehivavy Grika dia hatsaran-tarehy tsy fantatra. Ny hoditra fotsy dia noheverina ho taratry ny fahadiovana sy ny fientanam-po ary koa ny fiainana manankarena satria ny hoditra mandoko hoditra dia voamarina amin'ireo kilasy ambany sy andevo, izay nandany ora maro tamin'ny masoandro niasana.
Mba hitazonana hoditra hatsatra dia nampiasa vokatra toy ny tsaoka, firaka na arsenika izy ireo. Nametraka menaka vita amin'ny voaroy teny amin'ny takolany izy ireo, na dia makiazy tena kely aza satria nanjaka ny hatsarana voajanahary, tsy toy ny vehivavy orinasa nampiasa loko mafimafy kokoa.
Fikolokoloana volo tamin'ny andro taloha
Raha ny volo, samy nanosotra diloilo ny volo lahy sy vavy ary namoritra azy ireo satria io fomba io no noheverina ho mpanan-karena indrindra tamin'izany fotoana izany. Tian'ireo Grika ny hetsika asehon'ny onja sy ny curl. Ny andevo dia niandraikitra ny fitazonana ny volon'ireo tompony amin'ny toerana lavorary. Raha ny marina, ny taovolo sasany nanaovan'ny Grika taloha dia hita amin'ireo sarivongana izay mbola velona mandraka androany.
Ny vehivavy kilasy ambony dia tsy nitovy tamin'ny andevo tamin'ny volon'izy ireo satria nanao taovolo saro-bidy izy ireo ary nanangona ny volony lava tamin'ny tsipìka na kofehy voaravaka tsipìka sy tady kely. Tamin'ny fotoam-pisaonana ihany no nanapahan'izy ireo kely azy. Ho azy ireo, ny vehivavy kilasy ambany dia nanao fohy ny volon'izy ireo.
Navela hampitombo ny volon'izy ireo ny ankizy mandra-pahatongan'ny fahatanorana, rehefa notapahina mba hatolotra ho an'ireo andriamanitra. Nisy lehilahy nankany amin'ny mpanety indraindray ary tsy nanomboka nanaratra ny volombavany sy ny volombavany raha tsy taorian'i Aleksandra Lehibe. Ny fanavaozana iray hafa izay niaraka tamin'ny Mpanjakan'i Makedonia vokatry ny fandreseny tany Atsinanana dia ny fandokoana volo.
Any Gresy fahiny, ny loko mena dia maneho hatsarana amin'ny fahafenoany. Mba hitoviana amin'i Achilles sy ireo maherifo hafa amin'ny angano grika, ny lehilahy dia namorona fomba fanamaivanana ny volo amin'ny fampiasana vokatra toy ny vinaingitra, ranom-boasarimakirana ary safrona.
Fanesorana volo eo amin'ny tontolo klasika
Mba hanesorana ny volo amin'ny vatana dia nampiasa hareza ny vehivavy ary namboarina tamin'ny paty manokana na tamin'ny labozia.. Ny Grika taloha dia nihevitra fa tena zava-dehibe ny fanesorana tanteraka ny volo amin'ny vatana satria ny vatana malemilemy dia mariky ny tsy fananan-tsiny, ny tanora ary ny hatsaran-tarehy.
Ny waxing dia nameno fanorana niaraka tamin'ny menaka sy menaka manitra hampitony ny hoditra. Ity fombafomba ity dia notontosain'ny kosmetés tany amin'ny gym, izay mpialoha lalana an'ny salon hatsaran-tarehy.
Ny fombafomba fikolokoloana amin'ny kolontsaina hafa
Tamin'ny fandreseny an'i Byzantium, Egypt, ary Syria, ny silamo dia nandova ny fitiavany loharano mafana avy tamin'ny Romana sy ny Kristiana Byzantine.
Taloha, tamin'ny kolontsaina Silamo dia noheverina fa ny hafanan'ny hammam dia nitombo ny fiterahana ary, noho izany, ny fitomboan'ny mpino. Ka ny Arabo dia nijanona tsy nampiasa ny rano avy amin'ny frigidarium (efitrano mangatsiaka) handro ary ny tepidarium sy caldarium ihany no nampiasain'izy ireo.
Ka any amin'ny firenena Arabo, toerana hamoriana fiaraha-monina lehibe ihany koa ny hamama ary nijanona teo am-bavahadin'ny moskea. Ny fandalovany tany amin'izy ireo dia toa fanomanana sy fanadiovana hidirana amin'ny tempoly.
Soa ihany ity fombafomba amin'ny fikolokoloana teraka tany Gresy taloha ity ary notehirizan'ny firenena Silamo dia mbola velona mandraka androany. Any amin'ny tanàna maro dia misy fandroana Arabo ahafahanao miaina an'io fomban-drazana taloha io amin'ny hoditrao. Drafitra mahafinaritra ny mandany faran'ny herinandro tolakandro, miala sasatra sy miala sasatra amin'ny vatana sy saina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Fikolokoloana sy fikolokoloana vatana any Gresy fahizay
Salama, manao ahoana ianao? Toa tsara tokoa raha miresaka momba an'io ianao
Mamaly ny masoandro
gshcgzc dia hoy izy:
Valio i gshcgzc
Fitsangatsanganana an-tsambo: Ataovy izay hahatanteraka ny nofinao rehetra!